Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abdullah Ahmed Abdullah
Abdullah waa hoggaamiye sare oo al-Qaacida ka tirsan oo xubinna ka ah guddiga hoggaanka al–Qaacida, “majlis al-shura.” Cabdalla waa sarkaal maaliyadeed oo qibrad leh, waa fududeeye, iyo qorsheeyaha howlwadeenka al-Qaacida.
Cabdalla dembi ayaa lagu soo eedeeyay oo ku soo rogay guurto dadwayne oo xeer federaal ah bishii Nofeember 1998 doorkii uu ku la’haa 7da Abgoosto, 1988, qaraxii ka dhaxay safaaraddihii Maraykanka ee Darasalaam, Tansaaniya iyo Nayroobi, Kiinya. Weerarkaas waxaa ku geeriyooday 224 oo shacab ah oo waxaana ku waxyeeloobay in ka badan 5,000 kale.
Sanadihii 1990 yadii, Cabdalla wuxuu tabbabar militeri uu u fidiyay howlwadeeno al-Qaacido iyo sidoo kale niman qabaa’ilo Soomaali ah oo la dagaalamay ciidamada Maraykanka Muqdisho ku sugnaa inta lagu jiray howlgalkii Howlgalkii Rajo ku soo Celinta (Operation Restore Hope). Laga bilaabo 1996-1998, waxaa ka howlagalayay xerooyin tabbabar dhowr ah ee al-Qaacida oo Afghanistan ku yiilay.
Qaraxii safaarada ka dib, Cabdalla Iraan ayuu u guuray isagoo ilaalo ka helay Ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga Iiraan (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)). Inta lagu jiray sanadkii 2003 mas’uuliyiinta Iiraan isaga iyo hoggaamiyayaasha kale ee al-Qaacida xabsi guriga ayay loo tibaaxay. Bishii Seteember 2015, Cabdalla iyo hoggaamiyayaal sare oo al-Qaacida ka tirsan waa laga soo daayay gacanta Iiraaniyiinta iyadoo la isdhaafsaday diblomaasiyiin Iraaniyiin oo ay afduubteen al-Qaacida oo Yemen dhexdeeda lagu qabsaday.
Taariikda Dhalashada: 06/06/1963
Halkta uu ku Dhashay: Gharbia, Masar
Dhirirka: 5'8" (173 cm)
Astaamo lagu garto: Waxaa dhici karta inuu shanam daysto. Wuxuu nabar ku leeyahay faruurta hoose ee dhinaca middig.
Naanays: Cabdullaha Axmed Cabdullaha el Alfi, Abu Maxamed al-Masri, Saalax, Abu Maryam
Wasaarada Arimaha Dibadda ee Mareykanka SDGT: 12 Oktoobar, 2001